ဘယ်လို personalize Gmail ကို နှင့် Las အကောင်းဆုံးကိရိယာများ
Gmail es အတွက် muchos usuarios el punto de referencia para recibir y enviar correos electrónicos pero,alo largo de los años, ha renovado enormemente sus gráficos para integrar cada vez más န်ဆောင်မှုများ de Google, convirtiéndose rápidamente en un verdadero hub de la plataforma de Google. . La interfaz se ha vuelto muy pesada y es incómoda de usar para muchos usuarios novatos, Que se encuentran con demasiada información y servicios inútiles en la pantalla.
အကယ်၍ Gmail interface သည်အလွန်ရှုပ်ထွေးပြီးကျဉ်းမြောင်းသည်ဟုသင်ယူဆပါကမှန်ကန်သောလမ်းညွှန်ကိုသင်ရောက်သည် - ကျွန်ုပ်တို့ကိုဤနေရာတွင်ပြမည် အကောင်းဆုံးကိရိယာများနှင့်ဂျီမေးလ်ကိုဘယ်လိုပြုပြင်မလဲ, para que pueda ရှိ un servicio de correo electrónico puro, sin demasiados adornos gráficos y servicios adicionales en la bar lateral izquierda. Al finalizar la lectura seremos capaces de gestionar Gmail de forma sencillaeinmediata, leyendo inmediatamente nuestros correos electrónicos desde la PC y respondiendo rápidamenteatodos los mensajes recibidos en el ínterin.
အဖတ်ကိုလည်း: Chrome နှင့် Firefox ရှိဂျီမေးလ်တိုးတက်ရန် extension များ
ဂျီမေးလ်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဂူဂဲလ်၏အီးမေးလ် ၀ န်ဆောင်မှုသည်ဆိုက်၏ဂရပ်ဖစ်မျက်နှာပြင်ကိုအမှန်တကယ်ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်စေရန်အတွက်ကိရိယာအားလုံးကိုပေးထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ Muchas configuraciones están ocultas y, အားဖြင့် lo tanto, son difíciles de ver, pero al leer detenidamente las líneas que se proponenacontinuación, podremos personalizar Gmail para que sea más inmediato de usar, especialmente en el နေရာ အလုပ်၏။
တွေ့ဆုံနှင့် Hangouts ကိုပိတ်ပါ
Los primeros servicios adicionales que podemos eliminar de inmediato de la barra lateral izquierda son Meet y Hangouts, especialmente si no tenemos la intención de utilizarlos. Para continuar, vayamosala página web de Gmail, inicie sesión con nuestra အကောင့် de Google, presione el ícono de ajustes en la parte superior derecha, haga clic en ဆက်တင်အားလုံးကိုကြည့်ပါ နောက်ဆုံးကဒ်ကိုသွားပါ chat နှင့်အစည်းအဝေးများ.
ပေါ်လာလိမ့်မည်သောစာမျက်နှာပေါ်တွင်ငါတို့ check box ကိုလျှောက်ထား Hangouts ပိတ်ထားသည် mi Main menu ထဲကအစည်းအဝေးအပိုင်းကိုဖျောက်ထားပါထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့နှိပ်သည် ပြောင်းလဲမှုများကိုသိမ်းပါ. ယခု, finalmente, Gmail se ocupará solo del correo electrónico, sin otros servicios secundarios de Google que no se utilicen.
ကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်နိုင်သည့်အခြားစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ခြင်းသည် Gmail ၏ဘယ်ဘက် sidebar တွင်တွေ့ရသောတံဆိပ်များနှင့်အီးမေးလ်များပူးတွဲပါသောအမျိုးအစားများကိုရည်ညွှန်းသည်။ ဖော်ပြခဲ့တဲ့အချက်တွေအားလုံးဟာအသုံးမ ၀ င်ဘူး၊ tags များနှင့်အမျိုးအစားများကိုစီမံခန့်ခွဲရန်, menu ကိုပြန်သွားကြကုန်အံ့ ဆက်တင်အားလုံးကိုကြည့်ပါ (como se vio en el capítulo anterior) y abra la pestaña Tags:.
ဒီဖန်သားပြင်မှကျွန်ုပ်တို့သည် element ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့မနှစ်သက်သော element များကိုဖယ်ရှားနိုင်သည် esconder; အကယ်၍ အစားကျွန်ုပ်တို့သည် element အချို့ကိုမြင်စေလိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည် element ကိုရွေးချယ်နိုင်သည် ထိတွေ့မှု နှစ်ခုစလုံးသည်အသံကိုရွေးချယ်သည် မဖတ်လျှင်ပြပါ (အချို့သော tags များအတွက်သာဖြစ်သည်) သို့မှသာကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သော tag များသာတစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့်ဖြစ်သည်။ တံဆိပ်များလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားမည်မဟုတ်ဘဲဝှက်ထားလိမ့်မည် - သူတို့ကိုမြင်ရရန်ဘယ်ဘက် sidebar ရှိ More menu ကိုနှိပ်ပါ။
အကယ်၍ အစားထိုးမယ်ဆိုရင် Gmail home page (အမျိုးအစားဘေးတွင်) ပေါ်လာသောအမျိုးအစားများကိုကျွန်ုပ်တို့စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ချင်တယ် မူလတန်းမဖျက်နိုင်သည့်) မီနူးမှ Inbox tab ကိုသာဖွင့်ပါ ဆက်တင်အားလုံးကိုကြည့်ပါ.
ကျွန်ုပ်တို့သည်အရာအားလုံးကိုဖျက်ပစ်နိုင်သည် (နှင့်အီးမေးလ်များကိုအမျိုးအစားတွင်သာဖတ်နိုင်သည်။ ) မူလတန်း) o dejar solo una o dos categorías, para tener todo bajo control y evitar tener que dispersar el contenido de los correos electrónicos. Si queremos ဖန်တီး nuevas etiquetas personalizadas y mostrarlas en la barra lateral, todo lo que tenemos que hacer es expandir la barra lateral izquierda (presionando el icono de hamburguesa en la parte superior izquierda), presionar en အခြားစာရင်းကိုဖြတ်ပြီးနောက်ဆုံးကိုနှိပ်ပါ ဖန်တီး အသစ်က tag ကို။ ကျွန်ုပ်တို့၏တံဆိပ်ကိုဖန်တီးပြီးသောအခါ၊ စီမံခန့်ခွဲသောတံဆိပ်များ (တူညီသောဘားတွင်ရှိ) ကိုနှိပ်ပါ။ ထို့နောက်ကိုနှိပ်ပါ ထိတွေ့မှု junto al nombre elegido para la nueva etiqueta, por lo que siempre puede tenerloaun clic de distancia.
Si realmente nos encanta personalizar nuestro အာကာသ de trabajo, Gmail se puede personalizar con algunos temas preestablecidos y con diferentes estilos, para convertirse en una herramienta hermosa y fácil de usar con solo unos pocos clics. Para cambiar el tema y el စတိုင် del cuadro, todo lo que tenemos que hacer es presionar el ícono de engranaje en la parte superior derecha y desplazarnos por la ventana desaparecida, para que pueda elegir inmediatamente el diseño gráfico.
တနည်းအားဖြင့်မီနူးဆီကိုခေါ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဆက်တင်အားလုံးကိုကြည့်ပါ, tab ကိုဖွင့်လှစ် themes များ ဆက်သွားပါ ဆောင်ပုဒ်သတ်မှတ်မည်ဒါဆိုငါတို့လျှောက်ချင်တဲ့ဂရပ်ဖစ်ကိုရွေးလို့ရတယ်။
En el lado derecho del sitio web de Gmail encontramos una barra delgada, donde hay extensiones de Google que se နိုင် integrar al servicio de correo. Básicamente encontraremos ဂူဂဲလ်ပြက္ခဒိန်, သိမ်းထား mi တာဝန်များကို, ဒါပေမယ့် + icon ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Gmail နှင့်လိုက်ဖက်သောများစွာသော add-ons များထဲကတစ်ခုကိုထည့်နိုင်သည်။
Como se puede ver en la imagen de arriba, podemos encontrar el complemento para integrar Zoom y otros servicios de videoconferencia, pero también extensiones para la မိုဃ်းတိမ်ကို, extensiones para tareas remotas y administradores de notas y mucho más.
Gmail es solo aparentemente espartano y no muy personalizable: como se muestra ampliamente en los capítulos anteriores, literalmente podemos cambiar todos los aspectos de la interfaz y administrar las etiquetas y categorías en las que se ordenan los mensajes de correo electrónico, así como desactivar လုပ်ငန်းဆောင်တာ poco utilizadas como Meet y Hangouts.
Si queremos activar filtros automáticos basados ​​en nuestras etiquetas personalizadas, te invitamosaleer las nuestras စတင်ရန်နှင့်ဂူဂဲလ်စာမေးပွဲကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး ဖြစ်ရန်ဂျီမေးလ်လမ်းညွှန်ကိုအပြီးသတ်ပါ.
Si por el contrario queremos gestionar mejor las notificaciones de la aplicación Gmail en အန်းဒရွိုက်, te recomendamos nuestro artículo Android တွင် Gmail အသိပေးချက်များကိုစီမံပါ။ ငါတို့ကဂျီမေးလ်ဝန်ဆောင်မှုအသစ်မှာလား။ ဒါကြောင့်ငါတို့နက်ရှိုင်းသောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုမဆုံးရှုံးပါစေနဲ့ အကောင်းဆုံးဂျီမေးလ်အင်္ဂါရပ်များဂျီမေးကိုကျွမ်းကျင်သူအဖြစ်ချက်ချင်းသုံးနိုင်သည်။
စကားဝှက်များကိုအခမဲ့သိမ်းဆည်းရန် LastPass အတွက်အခြားနည်းလမ်းများ
နံပါတ်ကို WhatsApp တွင်ဝှက်ရန်
ပရိုဂရမ်များကို Samsung Smart TV တွင်မည်သို့သိမ်းဆည်းရမည်နည်း